March 2013 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Soe Gyi shared Aye Chan Mon's photo.
အမျိုးသမီးတစ်ဦးထဲကနေ ကလေး အများဆုံး ဘယ်နှစ်ယောက်မွေးနိုင်မယ်လို့သင်ထင်ပါသလဲ... ၉ ယောက် ၁၀ ယောက် ဒါမှမဟုတ် အလွန်ဆုံး ၁၄ ယောက် ၁၅ ယောက်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်မိမှာပါပဲ... ဒါဆိုရင်တောင် အတော်မွေးနိုင်တယ်လို့ဆိုကြမှာပါပဲ...
by Volov Ra (Notes) on Saturday, March 30, 2013 at 2:24pm
ပါဝင်ပတ်သတ်ခြင်း ရှိ/မရှိ ရအောင်ရှာကြသည်
လျှို့ဝှက်ချက်ကင်းသောကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (သို့) ကွမ်တမ်ကွန်ပြူတာ
ယခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျူတာများတွေ့ရဲ့ပရော်ဆက်ဆာ တွေကို စီလီကွန် ဆိုတဲ့ဒြပ်စင်တွေကနေတဆင့်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နည်းပညာအရခေတ်မှီတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာစီလီကွန်တောင်ကြားဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအပြိုင်တည်ဆောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် ။
by Seaman Nayminthu (Notes) on Sunday, March 31, 2013 at 4:50am
‘မိန်းမရေ ဒီနေ့ ရိက္ခာရမယ်ဟေ့’
မနက်စောစော ရုံးမသွားမီ အဆာပြေစားနေရင်း ဇနီးဖြစ်သူကို သတိပေးလိုက်၏။
Soekyi Divis shared မြန်မာ စာအုပ်များ's photo.
Author: lubo601 | 6:32 PM | No မှတ်ချက် |
တဲအတွင်းရှိ လူမောင်နှင့်မယ်အိတို့ကို သွားကြည့်ကြသောအခါ၊ ရန်ညှိုးကြီးကြီးနှင့် အကြိမ်ပေါင်း မြောက်မြား စွာ နောက်ထပ်ခုတ်ထစ်ထားသော ဒါးဒဏ်ရာများနှင့် ဦးနှောက်ထွက် ဗိုက်ပေါက် နေသော လူမောင်၏ အလောင်းနှင့် လည်ပင်းတိတိယိယိပြတ်နေသော မယ်အိတို့အ လောင်းကို တွေ့ရသောကြောင့်၊ တရွာလုံသနားစုတ်သပ်၍ မဆုံးရှိလြေ၏. တချို့ကလည်း။
ဖယောင်းတိုင်ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ဆိုးကျိုး
Author: lubo601 | 6:27 PM | No မှတ်ချက် |
ဖယောင်းတိုင်ထွန်းခြင်းဟာ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်သလို ကင်ဆာ ရောဂါပါ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း နောက်ဆုံး ရှာဖွေလေ့လာမှု့များ အရသိရပါတယ်။ ဖယောင်းသားကို မီးလောင်တဲ့ အခါ အဲ့ဒီကထွက်တဲ့ အငွေ့ဟာ အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ လေကို ညစ်ညမ်းစေပြီး လူတွေအတွက် ကင်ဆာပါ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
လန်ပိကျွန်း အမျိုးသားအဏ္ဏ၀ါဥယျာဉ် ( Marine National Park )
Author: lubo601 | 6:26 PM | No မှတ်ချက် |
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ကော့သောင်းခရိုင်၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့ နယ်၊ အန်ဒမန်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းရှိ ကျွန်းတန်းရှည်(ခ) လန်ပိကျွန်း အမျိုးသား အဏ္ဏ၀ါဥယျာဉ် ( Marine National Park ) သည် ကော့သောင်းမြို့မှ ရေမိုင်(၆၀)၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့မှ ရေမိုင် (၄၀) ကွာဝေးပြီး မြောက် လတ္တီတွဒ် ၁၀ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ်နှင့် ၁၁ ဒီဂရီ ၀၂မိနစ်ကြား၊
အရေးပေါ်ကာလ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဖွဲ့
မြေမြုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းရေး အချိန်ယူရဦးမည်လို့ပြော
Author: lubo601 | 6:46 PM | No မှတ်ချက် |
ကျမတို့ မောင်နှမတွေ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ဦးလေးငယ်ကို တွေ့တာနဲ့ “ပုံပြောပြပါ” ဒါမှ မဟုတ် “ပုံပြင်နားထောင်ချင်တယ်”ဆိုပြီး ပူဆာခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ ဦးလေး အချိန်ရပြီ ဆိုတာနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး သိသလောက် မှတ်မိသလောက်ပုံပြင်လေးတွေကို ကျမတို့ နားလည်အောင် ပြောပြလေ့ရှိတယ်။ ပုံပြင်မဟုတ်လည်း တစ်ထောင့်တစ်ည ၀တ္တုဖတ်ပြပြီး ပြန်ရှင်းပြတတ်တယ်။
Author: lubo601 | 6:37 PM | No မှတ်ချက် |
တစ်ရက်သား ကျနော့ငယ်ဆရာရယ် ကျနော်ရယ်…..ခရီးအတူထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မတွေ့ရတာကလည်း ကြာနေပီဆိုတော့….ကားပေါ်မှာ စကားတွေလည်းတော်တော်ပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဖြစ်တည်မှု ၃ ခု
Author: lubo601 | 6:29 PM | No မှတ်ချက် |
Cloud Cuckoo Land shared ရေးမိရေးရာလေးများ's photo.
ကျွန်တော်တို့ဟာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ဖြစ်တည်မှု့ ၃ ခုကို မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ အာဖရိကကလူတွေဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ကလူတွေဖြစ်ဖြစ် ကျွန်းပေါ်ကလူတွေဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ ၃ မျိုးကို ပထမဆုံး တွေ့ကြုံကြရမှာပါ။ ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ သင်ကိုယ်တိုင်ပါဘဲ။ ဒါဟာ သင်အသက်ရှင်နေသရွှေ့ သင် နှင့် သင်ဟာ အမြဲတမ်းအတူတစ်ကွ ရှိနေမှာပါ။
၀ါးရမ်းပြေး - (၁)
Author: lubo601 | 6:12 PM | No မှတ်ချက် |
(မှတ်ချက်။ ။ ၁၉၃၉- ခုနှစ်ခန့် က ဖြစ်သည်။ )
"ဘိုးဒန်သည် တရားခံစစ်တမ်းဖြစ်သော ၀က်ခြံကလေးထည်း၌ လက်ထိပ်သံကြိုးကြီး တန်းလန်း နှင့် အစစ်ခံ နေရလေ၏။
ဘိုးဒန်ဖြစ်သောအမှုမှာ ရိုက်မှုဖြစ်၍ အရိုက်ခံရသူမှာလည်း၊ ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာ အဖြစ် အတော်ကြာအောင် ကုသယူရရှာ၏။
Author: lubo601 | 6:05 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 6:04 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 10:17 PM | No မှတ်ချက် |
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပထမဆုံး သမ္မတ အဖြစ် လူသိများ
လေသည်။ သမ္မတတာဝန်ကို (၄.၁.၁၉၄၈)မှ (၁၆.၃.၁၉၅၂)ထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့
သည်။စ၀်ရွှေသိုက်ကို ၁၈၉၆ခု အောက်တိုဘာလ ၁၆ရက် သောကြာနေ့
ရှမ်းပြည်နယ် ညောင်ရွှေမြို့ အဖ စ၀်ချုံ၊အမိ ဒေါ်စ၀်နန်းဆာတို့မှ ဖွားမြင်သည်။ ငယ်အမည်မှာ စပ်ရွှေဆိုက် ဖြစ်ကာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဖြစ်လေသည်။
စာရေးဆရာတစ်ယောက်၏ မှတ်စုများ (မြင်းခြံ) (ဂျူး)
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ (တောင်ငူ) (ဂျူး)
အနုပညာဖန်တီးသူနှင့် အနုပညာ ခံစားသူ (စင်္ကာပူ) (ချစ်ဦးညို)
Author: lubo601 | 7:37 PM | No မှတ်ချက် |
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်စကား/အရပ်သုံးစကားပြောသင်ခန်းစာ (အပိုင်း ၂)
Posted by zar ni (My Way!) on March 28, 2013 at 18:26 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
6. SIGNAL THE START OF A SPEECH အမှာစကား/မိန့်ခွန်းစတင်ပြောကြားဖို့ အချက်ပြခြင်း
Right. Shall we start?
Right Ladies and Gentlemen. Shall we start with our presentation?
OK everybody. Let‟s get going. We only have twenty minutes.
ကဲအားလုံးပဲခင်ဗျာ။ စကြပါစို့။ ကျွန်တော်တို့ မိနစ်၂၀ ပဲအချိန်ရပါတယ်။
Right then. We are ready
Right then. We are ready. The first point in the agenda is cost-cutting.
ကောင်းပါပြီ။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအချက်ကတော့ ကုန်ကျစရိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
လွမ်းရိပ် ဝေေ၀ တက္ကသိုလ်မြေ
Author: lubo601 | 5:48 PM | No မှတ်ချက် |
by Hla Shwe (Notes) on Thursday, March 28, 2013 at 11:18pm
ဒီဇင်္ဘာလ၏ တနေ့သော နံနက်ခင်း။
အဓိပဓိလမ်း ပလက်ဖောင်းနှင့် ရေတမာပင်ကြားးက လူသွားလမ်းတွင် လမ်းလျှောက်နေသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခများ၊ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်မှ ဧည့်ပါမောက္ခများ၊ အာရှ၊ ဥရောပ၊ အာဖရိက တို့မှ ပညာရှာရန်လာကြသော ကျောင်းသားများသည် နံနက်ချိန်တွင် ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
Author: lubo601 | 5:45 PM | No မှတ်ချက် |
တန်းဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် အမွေ . ……..
Author: lubo601 | 5:44 PM | No မှတ်ချက် |
လျှို့ဝှက်ချက်ကင်းသောကမ္ဘာကြီးဆီသို့ (သို့) ကွမ်တမ်...
လန်ပိကျွန်း အမျိုးသားအဏ္ဏ၀ါဥယျာဉ် ( Marine National...
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်စကား/အရပ်သုံးစကားပြောသင်ခန်းစာ...
!!! ရှာမှ ရှားတဲ့ သာသနာ့ အာဇာနည် !!!
“အပိုင်ချည်တဲ့ အိုင်တီ အီကော်နော်မီသင်္ကြန်”
ဂျပန်မှ မြန်မာသို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများ (ODA) ပေ...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး တစ်ဦးတော့ အသစ် ရောက်လာပါပြီ ...။
မင်းလူ စာအုပ် ၂ အုပ်
အိမ်ထောင် မရှိတဲ့ အပျိုလည်း ဖြစ်ရမယ်၊ သုံးနှစ်လည်း...
မမိုးစွေကို မနမ်းဖြစ်ခဲ့တာက ဒီဇာတ်လမ်းကို စတင်ဖွင်...
သံချောင်းခေါက်လိုက်ပြီ (သို့မဟုတ်) ဘာသာမဲ့ခေါင်းဆေ...
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြေရှင်း ပေးနိုင်သည့...
ဂျပန်မှာ လွမ်း တဲ့ မုန့် လုံးကြီး ကြော်
စာရေးဆရာမကြီး (ဒေါ်) ရွှေကူမေနှင်းသို့ တုန့်ပြန်ချက်
ကိလေသာ နှင့် ပယ်သတ်နည်း
ကုသိုလ်နှင့်အကုသိုလ် - ဦးရွှေအောင်
"ဘီးရယ် မှန်ရယ် ကျောက်ပျဉ်ရယ်"
မြန်မာနိုင်ငံ ရဟန္တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ(၂)
တစ်ခါတုံးက မျိုးကြီး ဆိုတာက...
~ ဟိံသတရားနှင့် လူသား ~
ဖေမြင့်-၏ ဦးနှောက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါနှင့် ဘာ...
ထွေရာလေးပါး အယ်ဒီတာ ကိုတာတေနှင့် သူ၏ ကြေညာချက်
ဒီနေ့ရှုံးလား မြတ်လား....
ဦးကိုမောင်၏ ပြုံးစိစိများ (၂၁-၃)
မြို့လေးက ပေးတဲ့ လက်ဆောင်
“ငှက်ကြည့်သမား၊ လက်ပံတောင်းနှင့် ရပ်ရွာအခြေ့ပု ဖွ...
FEC ငွေတွေကို တန်ဖိုးအတိုင်းပေးပြီး ဈေးကွက်က ရုပ်...